[Ukara] Wondershare Photo Recovery: Naghachi ehichapụ Photos
Ofụri Esịt Naghachi Photos si PC ma ọ bụ ndị ọzọ Nchekwa Devices
Gbalịa Ọ Free N'ihi Windows 10/8/7 / Vista / 2000 / XP Buy Ugbu a
- Ndị ọzọ
Furu efu gị Digital Photos? Atụla egwu!
Wondershare Photo Recovery Bụ ihe niile ị ga-mkpa iji nweta ha azụ.
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na gị faịlụ na-ehichapụ, reformatted, furu efu, wdg Photo Recovery ga-ahụ na n'ụzọ zuru ezu weghachi gị niile dị oké ọnụ ahịa image, video na ọdịyo faịlụ site ọtụtụ nchekwa ngwaọrụ. Naghachi faịlụ site na gị na igwefoto dijitalụ, kaadị ebe nchekwa, USB mbanye, ike mbanye na ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ na ole na ole clicks. Photo Recovery Bụ a n'ụzọ zuru ezu-kwajuru ma mfe na-eji dijitalụ foto mgbake na media mgbake usoro zuru okè maka newbie na ọkachamara myiri.
Ike iṅomi gị na ngwaọrụ
Naghachi bụghị Dị nnọọ Photos, ọ bụghị nanị site na PC gị
Naghachi bụghị nanị photos, kamakwa videos na music faịlụ
Na-akwado otu n'usoro nke devices- Naghachi ehichapụ photos si PC, USB mbanye, igwefoto dijitalụ na ndị ọzọ na nchekwa media.
Na-arụ ọrụ kasị data ọnwụ ndapụta - Weghachi photos furu efu ruru mberede ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ, formatting, na-ezighị ezi ojiji nke ngwaọrụ gị, software okuku, virus ọrịa, na ihe ndị ọzọ.
Mgbanwe & kpọmkwem, Ọ dịghị Time egbughị
Easy ka ịkwụsịtụ, ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị foto mgbake n'oge Doppler usoro dị ka gị oge.
Zọpụta gara aga Doppler results na mbubata ya ịmaliteghachi mgbake enweghị ịgụ isiokwu otu ugboro ọzọ.
Faịlụ aha, size na ụbọchị nyo inyere gị aka ịchọta kpọmkwem faịlụ ngwa ngwa na-azọpụta gị oge.
Preview Tupu Ị Naghachi
Thumbnail Preview-ahapụ gị chọpụta ma ihe oyiyi bụ onye ị chọrọ.
Na tọmbneelụ Preview, nakwa ego àgwà nke onye ọ bụla image n'ọdịnihu.
Categorized Results for Fast Iweghachite
All recoverable photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ na-categorized na-akpaghị aka dị ka format, na-eme ihe niile adaba ịhụ na-azọpụtakwa unu oge.
Professional Nkà dịghị mkpa
Naghachi photos na dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ, dị mfe dị ka 1-2-3. Ọ dịghị mgbake nkà ma ọ bụ inyeaka ngwaọrụ chọrọ.
Enwere m ike naghachi ezoro ezo faịlụ?
Enwere m ike naghachi faịlụ ehichapụ a ogologo oge gara aga?
Enwere m ike naghachi faịlụ site na iPod, iPhone ma ọ bụ iPad?
Olee ụdị nke ngwaike ke software support?
Otu Easy Ngwọta naghachi Photos si Canon PowerShot